Dowladda Turkiga oo balan qaaday dib u dhiska ciidanka Badda Somaliya (SAWIRRO) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Dowladda Turkiga oo balan qaaday dib u dhiska ciidanka Badda Somaliya (SAWIRRO)
November 8, 2018 at 20:39 Dowladda Turkiga oo balan qaaday dib u dhiska ciidanka Badda Somaliya (SAWIRRO)2018-11-08T20:39:02+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Turkiya Mudane Hulusi Akar iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay oo ay ka mid ahaayeen Taliyeyaasha ciidamada Dhulka, Badda iyo Cirka ee dalkaas oo muddo labo maalmood ah ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa galabta dib ugu laabtay dalkooda kadib wada hadallo miro dhal ah oo ay la yeesheen madaxda qaranka.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa intii ay Muqdisho ku sugnaayeen waxa ay kulan gaar ah la yeesheen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna wada hadallo labo dhinacle ah la yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda iyo Taliyeyaasha ciidamada Qalabka Sida.
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay wada hadalladaas ayaa waxaa kamid ahaa in dowladda Turkiya ay sii xoojinayso dadaallada ay uga qeyb qaadanayso dhishamaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed.
Dowladda Turkiya oo haatan tababar iyo qalabeyn ku sameysa ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday dib-u-dhiska, tababarka, tayeynta iyo qalabaynta Ciidamada Badda si Dowladdu ay awood buuxda ugu yeelato difaaca xeebaha dalka oo idil, loogana hortago burcad badeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada ah.
Wasiirka Difaaca Turkiya ayaa dhankiisa adkeeyay in dowladdiisu ay taageero hagar la’aaneed la garab taagantahay dowladda Federaalka Soomaaliya, waxa uuna bogaadiyay horumarka ay dowladda ka sameysay dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo dhismaha ciidamada.
Wasaaradda Gaashaandhigga dowladda Federaalka Soomaaliya waxay uga mahadcelinaysaa Wasiirka Gaashaandhigga Turkiya Mudane Hulusi Akar iyo wafdiga la socday booqashada ay Soomaaliya ku yimaadeen iyo sida ay u muujiyeen in ay mar walba diyaar u yihiin garab istaaga dowladda iyo shacabka Soomaaliya.
« Immisa toddobaad ayuu Courtinho ka maqnaanaya garoomada?
Fred oo ka warbixiyay sababta uu isaga diiday Manchester City, kahor inta uusan ku biirin Red Divalis »